Maninday oniversite Toliara
samedi, 12 septembre 2015 10:31
Maninday Toliara : Tanin’ny oniversite 325 ha bodoin’ny olona
Halain’olona an-keriny ny tanin’ny oniversiten’i Toliara mirefy 325 ha. Misy ireo efa manorina trano ao amin’ny «campus», 5 m miala ny «amphi» toeram-pianarana. Efa ho iray taona izao no nampirongatra ity fakan’olon-tsotra ny tanin’ny oniversite ao Maninday ity.
JMJ Mada 8 : Manomboka tonga ireo mpizaika
Hisokatra afaka hefarana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny tanora katolika (JMJ) eto Madagasikara. Andiany faha-8 ny amin’ity 2015 ity, izay hampiantranoan’ny Diosezin’i Fianarantsoa ny 15-20 septambra.
Ramatoa Brigitte tompom-bato
mercredi, 09 septembre 2015 21:19
Tsy manaiky lembenana ramatoa Brigitte tompom-bato
Anisan'ireo mpandraharaha mpitrandraka vato i ramatoa Brigitte, nogejain'ny lehiben'ny Faritra anefa izany vato izany.Tsy nanaiky ny angina sy ny tsindry hazo lena izy, fa niakatra hatrany Antananarivo hitaky ny vatony izay milanja 18 taonina, izay nogejain'ny sampandraharahan'ny harena ambanin'ny tany, nefa dia gaga ny rehetra fa nanjavona tsy hita popoka izany vato izany.Araky ny ahafantarana azy moa dia ny mpisolo vava ôlala no miaro ireo voan'ny tsindry hazo lena.
mardi, 08 septembre 2015 22:57
Mpianatra mendrik’i Lalangina : Nitsidika ny Lapan’Iavoloha
Nandray ireo mpianatra sangany sy nahomby avy any Fianarantsoa, Distrikan’i Lalangina tamin’ny fanadinana CEPE sy BEPC 2015 farany teo ny Filoha Hery Rajaonarimampianina androany tao amin’ny Lapa-panjakana Iavoloha. 37 no isan’ireo mpianatra ary 9 taona ka hatramin’ny 17 taona izy ireo. 19,5/20 no naoty ambony indrindra azon’ireo mpianatra nanala CEPE ary 15,40/20 kosa ho an’ireo nanala BEPC. Ny solombavam-bahoaka Bosco, voafidy tany an-toerana, no nitarika sy niantoka ny fitondrana azy ireo ho aty Antananarivo ho fankasitrahana ny ezaka vitan’izy ireo sy ho fampirisihina hanao tsaratsara kokoa.
Mpiasan'ny Jirama nampanantsoana eny amin'ny Brigade de recherche
mardi, 08 septembre 2015 12:53
Niakatra teny amin'ny brigade de recherche nanaovana enquete ireo dimy mirahalahy mpitarika ny sendikan'ny mpiasa eo anivon'ny JIRAMA, naharitra adiny dimy teo ny ny fanadiadiana an'izy ireo. Izany dia noho ny raharaha baomba hita teny amin'ny foibe-toeran'ny Jirama andro vitsivitsy izay, navotsotra izy dimy mirahalahy, ary mbola hitohy indray ny tolona manomboka androany eny Soanierana
mardi, 08 septembre 2015 12:23
Morombe : Mpirahalahy zana-drafy nifampikapa famaky
Lonilony sy disadisa nikotrika am-bolana maro vokatry ny ady lova taorian’ny nahafatesan-drain’izy ireo no fototry ny olan’izy mirahalahy zana-drafy ireto. Efa voatsizaran-drainy fahavelony tamin’ireto zanany telo mirahalahy ny anjara lovan’ny tsirairay (tany, omby, sns). Tsy nanaiky izany anefa ny zoky olona zanaka tamin’ny vady hafa, fa misy ny zara vilana miangatra. Omaly, raha niraoka voly tamin’ny tanimbolin’ny zokiny ny ombin’ilay zandriny, dia raikitra ny fifamaliana niafara tamin’ny fifamonoana nahatsiravina. Nifampikapa famaky sy nifanindrona lefona izy roalahy, trobaka kibo miady mafy amin’ny fahafatesana ny iray any Morombe - Toliara.
dimanche, 06 septembre 2015 22:45
Sambava : Nirehitra ny tranon’ny pretra ao amin’ny EKAR Antanifotsy
Nanodidina ny tamin’ny valo alina teo ny afo. Mbola tsy fantatra ny antony fa samy mihazakazaka ao anaty haizina, mifanome tanana ny vahoaka mamono ny afo. Tonga nanampy koa ny mpamono afon’ny ADEMA, ora iray aty aoriana firehetan’ny trano.Misy telo ny fiangonana katolika lehibe ao Sambava, ka ity misy trano mirehitra ity no any amin’ny tapany avaratra fidirana ny tanàna, dia misy koa ny ao afovoan-tanàna ary somary atsimo ny fahatelo.